The Ab Presents Nepal » यिनै हुन् पुलिस रि’पोर्ट लिन आएकी २१ वर्षकी युवतीलाई ब’ला’त्कार गर्ने डिएसपी !
यिनै हुन् पुलिस रि’पोर्ट लिन आएकी २१ वर्षकी युवतीलाई ब’ला’त्कार गर्ने डिएसपी !
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार खिउजुवि’रुद्ध ज’बरजस्ती क’रणीमा कि’टानी जा’हेरी द’र्ता भएको छ। ललितपुर महांकालकी २१ वर्षीया युवतीले खिउजुवि’रुद्ध ललितपुर प्रहरी परिसर, जावलाखेलमा बुधबार दिएको कि’टानी जा’हेरी बिहीबार द’र्ता भएको हो।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक टेकप्रसाद राईले खिउजुवि’रुद्ध परेको जा’हेरी द’र्ता भएको जानकारी दिए। पी’डित युवती बुधबार साँझ प्रहरीमा पुगेकी थिइन्। उनले कि’टानी जो’हरी दिएलगत्तै प्रहरीले पाटन अस्पताल लगेर स्वास्थ्य प’रीक्षण गराएको थियो।
प्रहरी रि’पोर्ट बनाउन गएको मंसिर ३० गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँ जाँदा सहयोग गर्ने ब’हानामा खिउजुले एक्लै बनाएर का’र्यकक्षमै ज’बरजस्ती गरेको पी’डित युवतीले दा’बी गरेकी छिन्। उक्त ग’लत क्रि’याकलापको तस्बिरसमेत खि’चेर आफूलाई ‘ब्ल्या’कमेल’ गरेको पी’डितको भनाइ छ। त्यसपछि पनि पटक–पटक खिउजुले शा’रीरिक शो’षण गरेको उनको दा’बी छ। खिउजुले हालैमात्र स्वे’च्छिक अ’वकास लिएका छन्।